သူ … သိသားနဲ့ -
By : Than Zin
မြို့တစ်မြို့သို့လူပျို တရားသူကြီး တစ်ယောက် ပြောင်း ရွေ့လာသည် ။
လူပျို ဘာဝ ပျော်ပါးချင်လာ သောကြောင့် တပည့် ဖြစ်သူအား ပြည့်တန်ဆာ ခေါ် ခိုင်းလေသည်။
ပြည့်တန်ဆာမလေး ရောက်လာသောအခါ လူပျိုတရား သူကြီးက မပျော်ပါးခင် ကျီဆယ်သည့် အနေဖြင့်စကား စမြည်း ပြောလေသည်။
” အသက် ဘယ်လောက်လဲ ညလေး ”
” ၁၉ နှစ်ပါ ကိုကြီး ”
” နာမည်လေး ကကော ”
” အေပရယ် ပါရှင် ”
” ဒါမျိုး လုပ်စားတာ ကြာပြီလား ? ”
” ကြာသေးဘူး ရှင့် ”
” နေတော့ကော ”
” ပြည့်တန်ဆာ အခန်းမှာပဲ နေတယ် ကိုကြီး ”
လူပျိုကြီးမှာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရင်းနှီးမှု ရစေရန် အစ ရှိသည့် မေးခွန်းများ မေးပြီးနောက် ပျော်ပါးလေသည် ။
အေပရယ် ဆိုသော ပြည့်တန်ဆာ မလေးမှာ ပြည့်တန်ဆာမှု တစ်ခုဖြင့် ရဲမှ ဖမ်းဆီး၍ တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်လာသည်။
လူပျို တရားသူကြီးမှ တရာခံ ပြည့်တန်ဆာ မလေးအား မြင်လိုက်သော အခါ မိမိနှင့် ပျော်ပါးခဲ့ဘူးသော ကောင်မလေး ဖြစ်နေ သောကြောင့် မျက်နှာ ပျက်သွား လေတော့သည်။
ပျက်သွားသော အမူရာအား ပြန်ထိမ်းကာ အမှု စ စစ်လေ တော့သည် ။
“တရာခံ မိန်းကလေး အသက် ဘယ်လောက်လဲ?
ပြည့်တန်ဆာမလေး မှာလဲ ယခင် ပျော်ပါးခဲ့စဉ်က အမေး အမြန်း ထူးသော တရားသူကြီးအား အကုန် ပြောပြခဲ့ဘူး သဖြင့် ….
“သူ… သိသားနဲ့” ဟု သာ ဖြေလေသည်။
တရားသူကြီးမှာ အရှက်ကွဲ တော့မည့်အရေး တွေးပူကာ ကြောက်ရွံ့ လာမိသည် နောက် မာန်တင်းကာ ချောင်းဟန့်၍ ထပ်မံ အမူ့စစ်ပြန်သည်
“အဟမ်း…အဟမ်း တရားခံ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ?
“တရားခံ ဘာအအလုပ် လုပ်သလဲ ”
တရားခံမိန်းကလေးမှာ မေးသမျှ မေးခွန်းတိုင်းအား သူသိသားနဲ့သာဖြေဆိုနေသဖြင့် ထမ်မံစစ်လျှင် အ ရှက်ကွဲတော့မည့် အရေး ကြုံလာနိင်သောကြောင့်
တရားသူကြီးမှာ ဆက်လျှက် မစစ်ဆေးတော့ပဲ အမိန့်ချမှတ် လေတော့သည်။
“အမိန့်ချမယ်… နာခံစေ… တရားခံမှာ အသိဉာဏ်ယိုယွင်းကာ ဦးနှောက် ချို့ယွင်းနေသောကြောင့် အမူ့မှ ကွင်းလုံးလွတ်စေ” ဟူသတည်း။
သူ … သိသားနဲ့
မွို့တဈမွို့သို့လူပြို တရားသူကွီး တဈယောကျ ပွောငျး ရှလေ့ာသညျ ။
လူပြို ဘာဝ ပြျောပါးခငျြလာ သောကွောငျ့ တပညျ့ ဖွဈသူအား ပွညျ့တနျဆာ ချေါ ခိုငျးလသေညျ။
ပွညျ့တနျဆာမလေး ရောကျလာသောအခါ လူပြိုတရား သူကွီးက မပြျောပါးခငျ ကြီဆယျသညျ့ အနဖွေငျ့စကား စမွညျး ပွောလသေညျ။
” အသကျ ဘယျလောကျလဲ ညလေး ”
” ၁၉ နှဈပါ ကိုကွီး ”
” နာမညျလေး ကကော ”
” အပေရယျ ပါရှငျ ”
” ဒါမြိုး လုပျစားတာ ကွာပွီလား ? ”
” ကွာသေးဘူး ရှငျ့ ”
” နတေော့ကော ”
” ပွညျ့တနျဆာ အခနျးမှာပဲ နတေယျ ကိုကွီး ”
လူပြိုကွီးမှာ တဈဦးနှငျ့ တဈဦး ရငျးနှီးမှု ရစရေနျ အစ ရှိသညျ့ မေးခှနျးမြား မေးပွီးနောကျ ပြျောပါးလသေညျ ။
အပေရယျ ဆိုသော ပွညျ့တနျဆာ မလေးမှာ ပွညျ့တနျဆာမှု တဈခုဖွငျ့ ရဲမှ ဖမျးဆီး၍ တရားရုံးသို့ ပို့ဆောငျလာသညျ။
လူပြို တရားသူကွီးမှ တရာခံ ပွညျ့တနျဆာ မလေးအား မွငျလိုကျသော အခါ မိမိနှငျ့ ပြျောပါးခဲ့ဘူးသော ကောငျမလေး ဖွဈနေ သောကွောငျ့ မကျြနှာ ပကျြသှား လတေော့သညျ။
ပကျြသှားသော အမူရာအား ပွနျထိမျးကာ အမှု စ စဈလေ တော့သညျ ။
“တရာခံ မိနျးကလေး အသကျ ဘယျလောကျလဲ?
ပွညျ့တနျဆာမလေး မှာလဲ ယခငျ ပြျောပါးခဲ့စဉျက အမေး အမွနျး ထူးသော တရားသူကွီးအား အကုနျ ပွောပွခဲ့ဘူး သဖွငျ့ ….
“သူ… သိသားနဲ့” ဟု သာ ဖွလေသေညျ။
တရားသူကွီးမှာ အရှကျကှဲ တော့မညျ့အရေး တှေးပူကာ ကွောကျရှံ့ လာမိသညျ နောကျ မာနျတငျးကာ ခြောငျးဟနျ့၍ ထပျမံ အမူ့စဈပွနျသညျ
“အဟမျး…အဟမျး တရားခံ နာမညျ ဘယျလိုချေါလဲ?
“တရားခံ ဘာအအလုပျ လုပျသလဲ ”
တရားခံမိနျးကလေးမှာ မေးသမြှ မေးခှနျးတိုငျးအား သူသိသားနဲ့သာဖွဆေိုနသေဖွငျ့ ထမျမံစဈလြှငျ အ ရှကျကှဲတော့မညျ့ အရေး ကွုံလာနိငျသောကွောငျ့
တရားသူကွီးမှာ ဆကျလြှကျ မစဈဆေးတော့ပဲ အမိနျ့ခမြှတျ လတေော့သညျ။
“အမိနျ့ခမြယျ… နာခံစေ… တရားခံမှာ အသိဉာဏျယိုယှငျးကာ ဦးနှောကျ ခြို့ယှငျးနသေောကွောငျ့ အမူ့မှ ကှငျးလုံးလှတျစေ” ဟူသတညျး။
This Month : 33884
This Year : 205110
Total Users : 500243
Total views : 2069876